ဘယ္လိုအဝတ္အစားမ်ိဳးေတြက သင့္ခႏၶာကုိယ္ကို သြယ္လ်ေစမလဲ? - Lifestyle Myanmar
Home Fashion ဘယ္လိုအဝတ္အစားမ်ိဳးေတြက သင့္ခႏၶာကုိယ္ကို သြယ္လ်ေစမလဲ?
ဘယ္လိုအဝတ္အစားမ်ိဳးေတြက သင့္ခႏၶာကုိယ္ကို သြယ္လ်ေစမလဲ?
ခႏၶာကိုယ္လွပၿပီး အဝတ္အစားဝတ္ရင္ စတိုင္က်ခ်င္ၾကတာ မိန္းကေလးတိုင္းရဲ႕ အိမ္မက္ပါ။ ဗိုက္ခ်ပ္ေအာင္၊ ကိုယ္လံုးသြယ္လ်ေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ႏိုင္ေသးခင္္မွာ ဒီလိုအဝတ္အစားဖက္ရွင္ေလးေတြကို ဂရုတစိုက္ ဝတ္မယ္ဆိုရင္ သင့္ဗိုက္မွာ အဆီေတြစုေနတာ ၊ဗိုက္ေခါက္ထြက္ေနတာကို သိသာေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
၁။ Pencil skirt
Pencil skirtေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားကို ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ေကာက္ေၾကာင္းကို ေပၚလြင္ေစၿပီး ေျခေထာက္ကို ရွည္သြယ္ေစႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ပိန္တဲ့သူျဖစ္ေစ၊ ဝတဲ့သူျဖစ္ေစ ဖက္ရွင္က်ၿပီး စမတ္က်ေစပါတယ္။
ေဘာင္းဘီ၊ ဘေလာက္ သို႔မဟုတ္ စကတ္ ေဒါင္လိုက္အစင္းေလးေတြက သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို ရွည္လ်ားေစၿပီး သြယ္လ်တဲ့ပံုေပၚေစပါတယ္။ ဂါဝန္တစ္ထည္ ဝတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဒီ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္တာက အေကာင္းဆံုးပါ။ အရပ္ပုတဲ့သူေတြ၊ ဝတဲ့သူေတြ ဝတ္ဆင္ရမယ့္ ဖက္ရွင္ပါ။ ခါးေနရာပဲ သြယ္လ်ခ်င္ရင္ေတာ့ ေဒါင္လိုက္စင္းပါတဲ့ အက်ီၤကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ခါးျမင့္ေဘာင္းဘီေတြက သင့္ခါးကို ပိုသြယ္လ်ေစၿပီး သင့္ေျခေထာက္ေတြကို ရွည္သေယာင္ျဖစ္ေစပါတယ္။ အက်ီၤကိုေတာ့ ဆြယ္တာ၊ တီရွပ္ေလးေတြ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။
ခါးပတ္ပတ္တာက ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းနဲ႔ ေအာက္ပိုင္းကို balance ျဖစ္ေစၿပီး သင့္ခါးကို ပိုေပၚလြင္ေစပါတယ္။ ေဘာင္းဘီ၊ စကတ္နဲ႔သာ ဝတ္ဆင္လုိ႔ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ ခါးပတ္ပါတဲ့ ဂါဝန္ေလးေတြ ဂ်ာကင္ေလးေတြလည္း ဝတ္ဆင္ႏိိုင္ပါတယ္။
V ပံုလည္ပင္းေပါက္ေလးေတြက သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို ပိုၿပီးပါးလ်သေယာင္ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ ရင္သားမရွိတဲ့သူေတြ၊ ရင္သားႀကီးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ လိုက္ဖက္တဲ့ လည္ပင္းပံုစံျဖစ္ပါတယ္။
အဝတ္အစားတစ္ေရာင္တည္းဝတ္ဆင္ျခင္းက အရမ္းအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အနက္ေရာင္၊ အညိဳေရာင္ကဲသို႔ dark shades ေတြက အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈပါ။ အနက္ေရာင္လုိအေရာင္ရင့္ေတြက သင့္ခါးကိုပိုေသးသြယ္ေစပါတယ္။ အေရာင္ေဖ်ာ့ဝတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္ပုိင္းကို အေဖ်ာ့ဝတ္ၿပီး အကၤ်ီကို အေရာင္ရင့္ေလးဝတ္ဆင္ပါ။
ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္းက က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းဘူးဆိုေပမယ့္ ခါးေသးသြယ္တဲ့ပံုေပါက္ေစဖို႔ ကူညီေပးတာကေတာ့ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ေတြပါပဲ။ ဖိနပ္အပါးေတြက သင့္ခါးကိုတုတ္တာကို ေပၚလြင္ေစတာေၾကာင့္ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်လှပပြီး အဝတ်အစားဝတ်ရင် စတိုင်ကျချင်ကြတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ အိမ်မက်ပါ။ ဗိုက်ချပ်အောင်၊ ကိုယ်လုံးသွယ်လျအောင် လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်နိုင်သေးခင််မှာ ဒီလိုအဝတ်အစားဖက်ရှင်လေးတွေကို ဂရုတစိုက် ဝတ်မယ်ဆိုရင် သင့်ဗိုက်မှာ အဆီတွေစုနေတာ ၊ဗိုက်ခေါက်ထွက်နေတာကို သိသာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Pencil skirtတွေဟာ အမျိုးသမီးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်နှင့် ကောက်ကြောင်းကို ပေါ်လွင်စေပြီး ခြေထောက်ကို ရှည်သွယ်စေနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ပိန်တဲ့သူဖြစ်စေ၊ ဝတဲ့သူဖြစ်စေ ဖက်ရှင်ကျပြီး စမတ်ကျစေပါတယ်။
ဘောင်းဘီ၊ ဘလောက် သို့မဟုတ် စကတ် ဒေါင်လိုက်အစင်းလေးတွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ရှည်လျားစေပြီး သွယ်လျတဲ့ပုံပေါ်စေပါတယ်။ ဂါဝန်တစ်ထည် ဝတ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီ ဒီဇိုင်းမျိုးကို ရွေးချယ်တာက အကောင်းဆုံးပါ။ အရပ်ပုတဲ့သူတွေ၊ ဝတဲ့သူတွေ ဝတ်ဆင်ရမယ့် ဖက်ရှင်ပါ။ ခါးနေရာပဲ သွယ်လျချင်ရင်တော့ ဒေါင်လိုက်စင်းပါတဲ့ အကျီင်္ကို ရွေးချယ်ပါ။
ခါးမြင့်ဘောင်းဘီတွေက သင့်ခါးကို ပိုသွယ်လျစေပြီး သင့်ခြေထောက်တွေကို ရှည်သယောင်ဖြစ်စေပါတယ်။ အကျီင်္ကိုတော့ ဆွယ်တာ၊ တီရှပ်လေးတွေ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ခါးပတ်ပတ်တာက ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းနဲ့ အောက်ပိုင်းကို balance ဖြစ်စေပြီး သင့်ခါးကို ပိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ဘောင်းဘီ၊ စကတ်နဲ့သာ ဝတ်ဆင်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခါးပတ်ပါတဲ့ ဂါဝန်လေးတွေ ဂျာကင်လေးတွေလည်း ဝတ်ဆင်နိိုင်ပါတယ်။
V ပုံလည်ပင်းပေါက်လေးတွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုပြီးပါးလျသယောင်ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ရင်သားမရှိတဲ့သူတွေ၊ ရင်သားကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် လိုက်ဖက်တဲ့ လည်ပင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
အဝတ်အစားတစ်ရောင်တည်းဝတ်ဆင်ခြင်းက အရမ်းအထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အနက်ရောင်၊ အညိုရောင်ကဲသို့ dark shades တွေက အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါ။ အနက်ရောင်လိုအရောင်ရင့်တွေက သင့်ခါးကိုပိုသေးသွယ်စေပါတယ်။ အရောင်ဖျော့ဝတ်ချင်ရင်တော့ အောက်ပိုင်းကို အဖျော့ဝတ်ပြီး အင်္ကျီကို အရောင်ရင့်လေးဝတ်ဆင်ပါ။
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းဘူးဆိုပေမယ့် ခါးသေးသွယ်တဲ့ပုံပေါက်စေဖို့ ကူညီပေးတာကတော့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေပါပဲ။ ဖိနပ်အပါးတွေက သင့်ခါးကိုတုတ်တာကို ပေါ်လွင်စေတာကြောင့်ပါ။
Previous articleသင့္လက္သည္းေလးေတြ ခိုင္မာလာေစဖို႔ ၾကက္သြန္ျဖဴကို အသံုးျပဳနည္း
Next articleအိမ္ေထာင္က်ၿပီး ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ေတြရဲ႕ အမူအက်င့္ေလးေတြ
နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်များ၊ ဝါရင့်ခရီးသွားများပြောစကားအရ လေယာဥ်ပေါ်မှာမဝတ်သင့်တဲ့ အဝတ်အစားများ
Z*ONE အဖွဲ့ဝင် Minjuရဲ့ ရိုးရှင်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေးတွေ
အရင်ခေတ်တုန်းက မိဘအများစုရဲ့ သားသမီးတွေကို ထိန်းကျောင်းပြုစုပျိုးထောင်နည်းများ
Thinzar - November 19, 2019
ယနေ့ခေတ် သားသမီးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်နည်းတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနဲ့ယှဥ်မယ်ဆိုရင် အင်မတန်ကို ကွာခြားလွန်းလှပါတယ်။ အခုလိုမတူညီကြတော့လို့လည်း ယခင်တုန်းက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလေးတွေကို ပြန်ရှာဖွေလို့မရတော့တာမျိုး၊ သူတို့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို ပြန်လည်ခံစားလို့မရတော့ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အခုအချိန်လိုမျိုး အရာရာတိုးတက်ပြောင်းလဲပြီး နည်းပညာကခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာ သားသမီးတွေကို အကောင်းဆုံးပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ဖို့အတွက် ရွှေခေတ်တုန်းက အချိန်လေးတွေကို ပြန်ပြီးလေ့လာပေးနိုင်ပါတယ်။
မိဘတွေ လုပ်မိတတ်ကြတဲ့ ကလေးရဲ့ အိပ်စက်မှုကို ပျက်စီးစေသော အမှား (၈)ခု
အာဟာရပညာရှင်များ၏ ပြောစကားအရ ကျန်းမာရေးနဲ့အညီညွတ်ဆုံး ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
လျစ်လျူမရှုသင့်သော အဆီကျဆေးတွေရဲ့ အန္တရာယ် (၈)ခု
ပျော်စရာအကောင်းဆုံး မိသားစုခရီးစဥ်လေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုအစီအစဥ်တွေရေးဆွဲမလဲ
၁၀နှစ်တာ ကာလအတွင်း ကမ္ဘာကြီး ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့ သရုပ်ဖော်ပုံများ
စာကျက်တိုင်း လုပ်ဖြစ်နေတဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့
ရေမြေရပ်ခြားကို ခရီးသွားတော့မယ်ဆိုရင် မမေ့မလျော့ဘဲ ထုပ်ပိုးသွားရမယ့် ပစ္စည်းများ
အမျိုးသမီးတိုင်း လိုက်နာသင့်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းကောင်းများ
Health & Beauty760